Waa kuwee qalabka ugu fiican ee Amazon ee sanadkan?
Guusha muddada-dheer ee ku aaddan tartankan tartanka tartamaya ee aadka u xiisaha badan ayaa mar walba kaa doonaya in aad haysatid jadwal buuxa oo xakameynaya waxyaabaha muhiimka ah ee liiska alaabtaada sida liiska, xayeeysiinta, jawaab celinta, qiimaha, lacag bixinta, liis garaynta, iwm Iyo halkan waa qaar ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee Amazon ee loogu talagalay guurkaada ma aha oo kaliya in ay ka dhigto mid fudud laakiin u hesho faa'iido badan ka soo horjeeda aad u soo horjeeda suuqa. Qalabahan soo socda iyo qaababka internetka ayaa laga yaabaa inay yihiin kuwa ugu macquulsan fulinta. Waxaan go'aansaday inaan ku qoro habka ay u isticmaalaan. Waxaan rumeysanahay in caawiyayaashan internetka ahi ay tahay inay lahaadaan qof kasta oo iibsada markasta oo guulaysta - tours ica nazca pisco.
10 Siyaabaha ugu wanaagsan ee Amazon iibiyaha Xilligan
Qiime waa qaybaha ugu muhiimsan ee tartankaaga, iyo aduunka maanta isbedelaya isbeddelada suuqyada joogtada ahi waxay ubaahan tahay raadsasho dhow iyo kormeer. Waxaan ku talinaynaa isticmaalka RepricerExpress, sababtoo ah waxay runtii ka mid tahay qalabka ugu wanaagsan ee Amazon, ugu yaraan marka ay timaado qiimaha tartanka. Qalabkan, waxaad si sahlan u sameysan kartaa oo u habeyn kartaa xeeladaha qiimaha ee hadda jira iyo kuwa dheer. Waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa xeerarka cayaaraha ee sareeya, u dhig qiimaha sare iyo hoose ee qiimaha hoose, inaad ku xaqiijisid gareyntaadaada la filayo waqti isku mid ah. RepricerExpress ayaa sidoo kale ku badbaadin karta waqti badan, sababtoo ah soo dejinta baaxadda iyo raadinta qotodheer, iyo sidoo kale mawduucyo faa'iido leh oo la heli karo si aad u dalbato wixii isbeddel ah ee qiimahaaga hadda la joogo.
Doorasho kale oo ka mid ah qalab iibiyaha ugu wanaagsan ee Amazon ee kormeerka qiimaha iyo xakameynta iibkaada ee miisaanka, CamelCamelCamel ayaa laga yaabaa in ay u eegaan wax yar oo waalan on jaleecada hore. Laakiin runtii way shaqaynaysaa! Dhamaan hagaajinta qiimaha galka si habsami leh oo si buuxda ugu habboon baaritaanada waqtiga-dhabta ah, digniinta, iyo casriyeynta - iyadoo la adeegsanayo browserka kumbuyuutarka ee laga heli karo magaca Gawaarida ayaa xitaa ka dhigaya wax walbaa sahlan.
Isgaadhsiinta iyo Dib-u-eegista
Soo-celinta iyo ku qanacsanaanta macaamilka ayaa marwalba qayb muhiim ah ka ahaa guulaha ganacsiga, laakiin hadda dib-u-eegis badan oo ka mida dukaamo farxad leh ayaa lagu xisaabinayaa cabbirka qiimaha ee Amazon. Waxay micnaheedu tahay in qanacsanaanta macaamiishu aysan kaliya ka dhigi karin waxyaaba aad uga sii dareyso ganacsigaaga maraakiibta oo aad u liita, laakiin waxaa laga yaabaa in aad liisaska liiska alaabadaada hoos u dhigto liiska si aan waligood u arkin dad badan oo iibsadeyaal ah. Oo halkan ayaa ah marka fikradaha Express Express ay ciyaaraan. Marka ay timaado maamulka isgaarsiinta iyo automatization, dhab ahaantii waa mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee Amazon. Ma aha oo kaliya in aad digniin ku siisid faallooyin kasta oo xun oo macquul ah si aad marwalba u yareyso wax kasta oo carqaladeeyn kara waxqabadkaada, hase yeeshee wax badan ayuu ka caawiyaa markaad soo direyso dadka aad soo iibsatey ee ugu dambeeyay ee codsiyada aaminka ah si ay dib ugu noqdaan dib u eegis wanaagsan. Maaliyadda
Dhibaatada dhaqaale waxay mar walba xoojineysaa ganacsi, gaar ahaan awood yar ama mid dhexdhexaad ah. Mashaariicda dhoofinta e-macaamiishu ma aha kuwo laga reebo halkaas..Bixinta maal-gelinta ganacsatada online Kabbage waa badbaadada dhabta ah si aad u hesho raasamaal ganacsi aad u badan. Aasaasigani wuxuu qiimeeyaa waxqabadka ganacsiga ee iibiyaha kaas oo codsanaya caawimaad si loo isticmaalo xogta laga soo qaaday goobaha kala duwan oo ka baxsan Amazon iyo ganacsiyada ganacsiga si ay u bixiyaan xalal dhaqaale oo si fiican u qaabaysan oo daboolaya baahida macaamiisha ugu badan ee maraakiibta iyo ganacsiga.
Barnaamijkani wuxuu kaa caawin karaa inaad ka dhigto mid si sahlan u soo dajiya amarada macaamiisha si toos ah dukaamadaaga internetka oo aad ku muujineyso hab isku xiran. ShipWorks waxay ka mid tahay qalabyada ugu fiican ee Amazon marka aad u baahan tahay inaad ka shaqeyso qaansheegadka shakhsiyadeed, warbixinta la qorsheeyay, ololeyaal iimeyl ah, iyo waxyaabo kale oo badan oo laga yaabo inaad si dhab ah u aragto inaad haysato wax walba meel kasta oo ka dambeeya heshiis kasta oo iibka guuleysta.
Haddii aad ku jirto mashaariic dhowr ah oo badan oo ka mid ah e-macaamiisha, CurrenciesDirect waa MUST loogu talagalay ganacsigaaga internetka, dabcan, haddii aadan rabin Xusuuso wax kasta oo macquul ah oo la maareynaya tiro ka mid ah xisaabaadka bangiga ee maxaliga ah. Ma ogtahay sida dhabta ah waa sawirkaas, laakiin sida ku qeexan qiyaasta dhowaan la og yahay, qalabkan wax-qabadka bixinta ayaa awood u leh inuu ku badbaadiyo wax ku dhow 3% dakhligaaga saafiga ah - kaliya oo ka shaqeynaya hawlgallada saxda ah ee sicirka sicirka iyo kaydinta lacag maalin kasta.
Waxaan kugula talineynaa inaad dooratid inta u dhaxeysa erayada Ganacsiga iyo Google Key Tool-ka sida ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iibiya qalabyada Amazon oo wadada u ah ganacsiga guuleysta ganacsiga. Ka caawinta liiska soo saarida wax soo saarka, Qalabka Ganacsiga Qalabka muhiimka ah wuxuu daboolayaa in ka badan 20 milyan oo ah ereyada raadinta caanka ah ee ugu badan ee loo isticmaalo Amazon maalin kasta. Sida loogu talagalay qalabka muhiimka ah ee raadinta adduunka, waxay muujineysaa dhinacyadooda ugu xoogan inta badan iyagoo leh fikradaha muhiimka ah ee loogu talagalay koobabka sheyga iyo sharaxaadda badeecada.
Raadinta badeecooyinka cusub ee iibka iyo sahaminta fursadaha cusub ee ganacsiga waa qaybo aan kala go 'lahayn oo ka mid ah ganacsatada internetka ah. Laakiin haddii aad dareensan tahay inaad fahansan tahay helitaanka fursadaha ganacsiga ee Amazon, faa'idada faa'iidada leh ayaa kaa caawin kara maaraynta saxda ah oo ku tusaya liiska meelaha ugu sareeya ee suurtogalka ah ee liiska sheygaaga si aad ugu soo booddo.
Dabcan, waxa laga yaabaa inay u muuqato mid maskaxeed, laakiin adeegsiga naqshadaha caanka ah ee bulshada sida Facebook waa hab weyn oo lagu gaari karo gaadiidka badan ee liiska daawooyinkaaga ecommerce - iyadoon bixinta dayn. Dhammaan waxaad u baahan tahay waa inaad maal gashato wakhti aad ku sameysid ganacsi la xiriira ganacsiga. Sidaa daraadeed, marka aad abuurtay bogga ganacsigaaga, adeegso xayeysiis si aad u dhiirrigeliso alaabtaada oo marwalba ugu sarreyso shaashada raadinta. Maxaa ka sii badan - dhisida joogitaan xooggan oo ku saabsan warbaahinta bulshada oo leh maalin kasta soo dhejinta iyo hawlaha wada xiriirka, waxaad ka hadli kartaa si toos ah oo loogu tala-galay dadka macaamiisha ah. Maareeyaha Dib u Celinta
Maamulaha Lacag-celinta ayaa ka mid ah qalabka iibka ee ugu wanaagsan Amazon marka ay timaado mararka qaar si aan macquul ahayn u dhicin khaladaadka ama soo celinta aan la filayn oo ka imanaya macaamiisha, tusaale ahaan, sababtoo ah liiska burburay ama nooc kasta oo ah qarashka badan , sida khidmadda komishanka, qiyaasta, iyo khidmooyinka culayska, iyo sidoo kale waxyeelo kale ama dhibaatooyin ka dhasha habka. Isticmaal Maamulaha Soo Celinta si aad u ilaaliso nasiib-darro kasta oo ku socota jihada oo aad ilowdo dhibaatooyinka dambe ee soo noqoshada markiiba iyo dhammaanba.